Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2012 |
Ny Toe-tsaina no enti-mandresy #Apps4Africa
2012-03-21 @ 11:13 in Ankapobeny
Satria nanatrika ny valan-dresaka sy ny fifampitafàna notontosaina tao amin'ny Centre de Presse Malagasy ny tena tamin'ny Asabotsy 17 marsa lasa teo. Satria hita ho nafana ny adihevitra sy ny karazana fitarainana nametraka fa natao tenimidina ho an'ny Malagasy ny lohahevitry ny fifaninanana mandeha amin'izao fotoana izao ary efa hifarana sahady, fa tsy nisy ny fifampidinihana ary tsy nisy ny fampandrenesana ny besinimaro. Dia somary gaga ihany ny tena hoe oviana koa no nisy fifaninanana hoe andao isika (malagasy) hidinika fa hanao fifaninanana isika dia hojerentsika hoe inona no lohahevitra ifaninanantsika? Hanoratra kely ihany ny tena na dia tsy tompon'andraikitra misahana ny fifaninanana aza.
Voalohany, toe-tsaina ananantsika malagasy amin'ny maha-nosy antsika sy amin'ny maha-mponin'ny nosy antsika ny tia miavaka ary efa mahazatra antsika hatrany ny mamerimberina fa tsy Afrikana ny Malagasy. Raha manara-baovao ireo afaka manao izany dia na ny vaovao eto an-toerana no arahiny izay zavamisy matroka hatrany no manjaka na ny vaovao tandrefana no arahina satria ireny no fenitra ho antsika. Ny haino amanjery akaiky antsika dia ny haino amanjery eoropeana sy amerikana somary lavidavitra kokoa fa izany vaovao afrikana izany tsy mahasarika antsika loatra. Ny lozam-piarakodia tanaty lozoka nahafaty mpianatra tanora kely ampolony ka Belza no maro an'isa tamin'izany no mety hanohina antsika kokoa fa tsy ny fahafatesan'olona 200 mahery tany Kongo Brazzaville etsy Afrika.
Faharoa, mitovitovy daholo ihany ny fotoana nomena ny rehetra ka tsy dia ilaina loatra ny mitaraina noho ny fahateren'ny fotoana. Ny zavatra iray manahirana ny mieritreritra azy dia misy ireo manampahaizana no mimenomenona any ambadika any saingy tonga taty amiko ihany ny resaka fa nokobonin'ny "Malagasy i-Hub" irery ihany ny vaovao momba ny fifaninanana "Fanamby hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro" ka tapa-bolana sisa tsy hifarana vao mody navoaka ny fanambarana. Tsy haiko loatra aloha fa vao nanomboka kelikely ny fifaninanana aty amin'ny faritra misy antsika no efa nandeha ny fanentanana isian'ny vondrona miketrika momba io lohahevitra io tao amin'ny vohikalan'ny Malagasy i-Hub. Tsy fantatro loatra hoe tahotra tsy hahazo loka ve no anton'ny fitarainana sa isika kosa no tsy nikaroka loatra vao nahita ny fifaninanana? Efa faharesena sahady manko raha toa ka lazaina ho misy ny manafim-baovao.
Rehefa amin'ny tranga tahaka itony dia tsara raha hiaraha-mikaondoha ny ho atao ahitana izay zavatra tsara avoaka. Vahaolana sy fomba hamahana ny olana no karohina fa tsy ilaina intsony ny mametraka olana hafa hatrany. Raha izaho manokana aloha tsy ny handray olana hafa no andehanana any fa ny hikaroka ny hevitra mety hamahana olana na hevitra entina ampiasaina amin'ny fampiharana manodidina io lohahevitra io.
Raha ny hevitro manokana, noho ny fidadasiky ny lohahevitra dia zavatra tsotra ny fampiharana ilaina. Mety amin'ny finday tsotra izay ananan'ny besinimaro fa tsy hihazakazaka amin'ny finday avo lenta any. Ny zavatra ilaina dia fitaovana entina hamahana olana fa tsy voatery hamaha ny olana rehetra tsy akory, ary ny akaiky indrindra dia fitaovana entina mampita vaovao na zavamisy mifandraika amin'ity fifaninanana ity. Fa inona ary io zavatra tsotra io? Marihina fa raha izaho manokana dia ekeko ny tsikera hoe akaiky loatra vao misy ny fifampidinihana fa tokony tany amin'ny volana febroary tany no nanaovana azy mba hananana fotoana malaladalaka kokoa, saingy izao aloha no zavamisy ka mazotoa hatrany mikaro-kevi-baovao ry zareo.
Marihina fa firenena dimy ihany no mifaninana hitako momba ity Apps4Africa faritra atsimon'i Afrika ity dia i Afrika Atsimo, Botswana, Madagasikara, Zimbabwe ary Mozambika. Avy teto Madagasikara ny mpanentana no hizotra ho any Mozambika... izany hoe mbola aoriantsika ny fahalalàna ny vaovao momba azy ity ny firenena iray farafahakeliny satria nitety ireo firenena ireo no ataony amin'izao fotoana izao.